कस्तो अवस्थामा समयभन्दा छिटो जन्मिन्‍छन् बच्चा ? - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
काठमाडौं, फागुन १३ : सामान्यतया बच्चा ३७ हप्ता पुगेपछि जन्मिन्‍छन् । तर, यदि कोही बच्चा ३७ हप्ताभन्दा पहिला जन्मिएका छन् भने उनीहरूलाई हामी समय नपुगी जन्मिएको बच्चा भन्‍छौं। २६ हप्तापछि जन्मिएका बच्चालाई हामीले सकेसम्म बचाउने कोसिस गर्छौं ।
त्यस्ता बच्चालाई विशेष स्याहार चाहिन्‍छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई आईसीयूमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
गर्भवती महिलामा विभिन्‍न स्वास्थ्य समस्या भएमा बच्चा छिटो जन्मिन्‍छन् । आमामा ब्लड प्रेसर, खानपान र स्वास्थ्य उपचारको राम्रो व्यवस्था नहुँदा यो समस्या हुन्‍छ । त्यसैले, गर्भवती आमाले गर्भावस्थामा आफ्नो विशेष ख्याल राख्‍नुपर्छ ।
गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनुपर्छ । फलो-अपमा गइरहनुपर्छ । शरीरलाई प्रेसर पर्ने काम गर्नुहुँदैन । आराम गर्नुपर्छ ।
छिटो जन्मिएका बच्चाको स्याहार कसरी गर्ने भनेर उनीहरूको वजन कति छ ? र उनीहरू कति हप्तामा जन्मिएका हुन् ? त्यसको आधारमा भन्‍न सकिन्‍छ । समय पुगेर जन्मिएका बच्चाभन्दा नपुगी जन्मिएका बच्चाको स्वास्थ्य कमजोर हुन्‍छ ।
३२ हप्ताभन्दा पहिला जन्मिएका बच्चालाई विशेष केयर र उपचार चाहिन्‍छ । ३२ हप्ताभन्दा माथिका बच्चा यदि उनीहरू स्वस्थ छन् भने आमासँगै राख्‍न सकिन्‍छ ।
राम्रोसँग स्याहार पुगेमा समय नपुगी जन्मिएका बच्चालाई पनि बचाउन सकिन्‍छ । उनीहरू पनि बिस्तारै अरु बच्चाजस्तै सामान्य हुँदै जान्‍छन् । स्याहार पुगेमा जटिलताहरू पनि कम हुँदै जान्‍छन् ।
तर, उनीहरूले उचित स्याहार पाएनन् भने पछि गएर शारीरिक र मानसिक विकासमा समस्या देखिन्‍छ । लामो समय आईसीयूमा बस्‍नु परेको बच्चामा यो समस्या धेरै हुन्‍छ । त्यसैले, उनीहरूलाई विशेष किसिमको स्याहार गर्नुपर्छ ।